Petition · Somali Federl Government : Sharciga Yoonis (The Yoonis Law) · Change.org
Sharciga Yoonis (The Yoonis Law)
THE SOMALI SOCIETY started this petition to somali federal government and 2 others
Sharciyada waxaa loo sameeyaa in dadka lagu badbaadiyo naftooda iyo maalkooda. Sharcigu waa heshiis, wax la isla ogyahay iyo is-afgarad dhexmara dhammaan bulshada iyo hay’adaha xukuumadda talada iyo awoodda heysa. Dalkeena waxaa ku batay dilalka qorsheysan ee lagu bartilmaameedsanayo dadkii indhaha iyo mustaqbalka u ahaa bulshada, gaar ahaan dilalka macna-darrada ah ee loo geysto dhalinyarada aqoonyahanka soo koraya, ee ah indhihii ey bulshada Soomaaliyeed eeganeysay. Soomaaliya iskuma sii jirtee magaalda Gaalkacyo waxay noqotay meel dhalinyarada lagu han-jabiyo oo mustaqbalkooda iyo naftooda loo dhaafiyo wax aan innaba qiimo laheyn. Gaalkacyo waxay noqotay meel hooyo looga qarracansiiyo oo curradkeedii si sahal ah loogu bireeyo. Gaalkacyo waxay noqotay meel aabe tacabkii uu soo beeray sanado badan isagoo aan goosan ilbiriqsi lagu dhaafsiiyo.
Bulsho iyo xukuumad aan waardiyeysan karin ubaxeeda wax lagu tilmaamo lama garanayo.
Diiwaanka dheer ee ubaxyadii iyo haldoorka Soomaaliyeed ee magaalada Gaalkacyo lagu bireeyay sida arxan-darrada ah waxaa ugu danbeeyay marxuum Yoonis Cabdirisaaq (Dhaban-Koolis) oo habeenimadii Axadda 22kii bishaan lagu dilay magaalada Gaalkacyo isagoon cidna waxba ka galabsan. Yoonis wuxuu ahaa nin dhalinyaro arday ah dhigta jaamacadda Bariga Afrika. Yoonis waxay aheyd inuu shalay oo isniin aheyd uu gudbiyo buugiisa qalin-jabinta (dissertation). Yoonis wuxuu ahaa u ololeeye xuquuqda aadanaha, wuxuu marwalba bulshada ka waanin jiray in laga digtoonaado daadinta dhiiiga. Faaladii ugu danbeysay uu Yoonis bulshada la wadaago wuxuu tusaale usoo qaatay xarigii lagu xukumay jilaaga reer Hindiya Salmaan Khaan kadib markuu 20 sanadood ka hor uu deero dilay, Yuunis wuxuu yiri; “dadna dadkoodii caanka ahaa ayey u xireen deero uu dilay, annaga (Soomaaliya) dhiigii dadka ayaa bilaash lagu daadinayaa”.
Si dhiiga haldoorka ee qulqulaya loo joojiyo, annagoo ah bulshada Gaalkacyo oo isku duuban matalayana dhammaan umadda Soomaaliyeed ee wanaaga jecel; waxaan dawladdeena federaalka iyo dawlad-goboleedka Puntland ka codsaneynaa iney si dhaqso ah usoo saaraan sharci loogu magacdaray Yoonis oo noqonaya; SHARCIGII YOONIS (THE YOONIS LAW). Ujeedku ma’aha in Yoonis ka naf weyn yahay ama ka naf qiimo badan yahay dadkii kale ee sida xaqdarrada ah lagu dilay. Ujeedada waa inaan isticmaalno magaca iyo profile-ka Yoonis si aan nafaf kale ugu badbaadino.
Sharciga aan codsaneyno wuxuu u dhigan yahay sidatan:
1- In gacan ku dhiiglaha (haddii ey ku cadaato) xukunkiisa marnaba uusan ka yaraan dil toogasho ah.
2- In muwaadinku xaq u leeyahay inuu iska difaaco tuugada naftiisa iyo maalkiisa soo weerarta, haddii ey dhacdo in tuug weerar soo qaaday uu ku dhinto ama ku dhaawacmo gacanta muwaadin is-difaacaya, waa inaan waxba loo raacin muwaadinkaas (dabcan waa markey laamaha amniga iyo garsoorka hubiyaan arinkaas).
3- Waa in lasoo celiyaa sharcigii bandowga saarayay dhalinyarada da’doodu ka yar tahay 18ka sanadood ineysan magaalda dhex wareegi karin wixii ka danbeeya salaadda maqrib, wiilkii ama gabadhii sharcigaas jabiyana waa in xabsiga la dhigo ilaa ey waalidkii ka yimaadaan.
4- Ciidamada amniga waa iney habeenkii magaalada wado walba kormeeraan.
5- Tuugada wax dafa sida; moobeelada, haddii eysan qof dilin ama dhaawicin, goortii lasoo qabto waa in lagu xukumaa ugu yaraan 10 sanadood oo xarig ah.
Ugu danbeyntii, sharciga Yoonis (The Yoonis Law) waa in laga shaqo geliyaa dhammaan dalkoo dhan si aan u badbaadino ubaxa iyo indhaha mustaqbalka bulshadeena.
Please share my name and email address with THE SOMALI SOCIETY, so that I can receive updates on this campaign and others.
Today: THE SOMALI SOCIETY is counting on you
THE SOMALI SOCIETY needs your help with “Somali Federl Government : Sharciga Yoonis (The Yoonis Law)”. Join THE SOMALI SOCIETY and 246 supporters today.